ကားထဲက ပူနေတဲ့ ရေသန့်ဘူးကို သောက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုကျိုးများ
June 2, 2019 Cele Love 0
ကားထဲက ပူနေတဲ့ ရေသန့်ဘူးကို သောက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုကျိုးများ သုတေသနဌာနတစ်ခုရဲ့ အဆိုထုတ်ပြန်ချက်အရ ၉၀% သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့ အရင်းအမြစ်က ရေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေကြီးတာ၊ မိုးရွာတာတွေအပြင် ပူတဲ့နေ့တွေမှာဆို ရေသန့်ဘူးထဲက ရေကအစ သတိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဖော်ပြချင်တာကတော့ ကားပေါ်မှာ […]
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ကြည့်ရှုသူ အရမ်းကို များခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့ “ခလုတ်” သီချင်းဗီဒီယို
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ကြည့်ရှုသူ အရမ်းကို များခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့ “ခလုတ်” သီချင်းဗီဒီယို လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အပြည့်အဝ အားပေး ဝန်းရံမှုကို ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ရွှေထူးကတော့ လက်ရှိမှာ သီချင်း အသစ်တွေကို ဖန်တီး ထုတ်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသံကောင်းပြီး သူများနဲ့ မတူတဲ့ သီချင်း […]
ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက တကယ်​​တော့ ကိုယ့်​သိက္ခာနဲ့အချစ်​ကို အလဲအလှယ်​လုပ်​လိုက်​တာပါပဲ ….. “သိက္ခာရှိရှိ ချစ်​ပါ” ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက တကယ်​​တော့ ကိုယ့်​သိက္ခာနဲ့အချစ်​ကို အလဲအလှယ်​လုပ်​လိုက်​ရတာပါပဲ …။ ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက ​ယောင်္ကျား​လေးဖြစ်​ဖြစ်​ မိန်းက​လေးဖြစ်​ဖြစ်​ နှစ်​ဖက်​စလုံး နစ်​နာ တာပါ ပဲ …။ ကိုယ့်​ဂုဏ်​သိက္ခာကို ရင်းနှီးပြီး ချစ်​ခြင်းကြတာချင်းအတူတူ အခန့်​မသင့်​လို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြရရင်​ […]
လက်ကိုင်ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးချထားပြီး အိပ်တတ်သုများ ရလာမည့် ဆိုးကျိုးများ ….
လက်ကိုင်ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးချထားပြီး အိပ်တတ်သုများ ရလာမည့် ဆိုးကျိုးများ …. လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတစ်ခုကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော် …။ ဒီခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းများ ပေါများစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာနေကြပါပြီ။ လူအများဟာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပြီး ခေါင်းအုံးအနားမှာပဲချထားကာ အိပ်ပျော်သွားတတ်ကြပါတယ် […]
အတိုင်အဖောက်ညီညီနဲ့ ဟာသတွေပြောပြီး အူတက်အောင်ရယ်နေရတဲ့ အူဝဲ၊ခိုင်သင်းကြည်တို့ရဲ့ VIDEO လေး အူဝဲလို့ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ကိုပီပြင်ကျွမ်းကျင်စွာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုများလည်း ဆွတ်ခူးရရှိထားသူ စွယ်စုံရမင်းသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ မခိုင်လေးလို့အများကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံထိပ်တန်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးများထဲတွင်လည်း […]
မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး တောထဲတွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး တောထဲတွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား မန္တလေး ဇွန်လ ၂ ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္တီလာမြို့နယ်သရက်ပင်ကျေးရွာအနီးမိတ္တီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းအရှေ့ဘက်တပ်မြေအတွင်း တောထဲတွင်အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိ ရှိရ ပါ တယ် …။ ဇွန်(၂)ရက်နံက်(၉)နာရီခန့်သရက်ပင်ကျေးရွာအနီးမိတ္တီလာ ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းအရှေ့ဘက်တပ်မြေအတွင်းတောထဲတွင်အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရအလည်ရွာရဲကင်းစခန်းမှူးနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှသွား ရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးရာမိတ္တီလာကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းအ ရှေ့ဘက်လမ်းနယ်မြေသတ်မှတ်တိုင်နှင့်ကိုက်(၁၅၀)ခန့်အကွာတပ်နယ်မြေအတွင်းတောထဲရှိ တမာပင်၌လည်ပင်းတွင်ပုဆိုးအနက်ကွက်စိပ်အားစုတ်ဖြဲပြီးကြိုးသဖွယ်အသုံးပြုကာမိန်းမချည်တုတ်နှောင်၍တမာပင်အတက်ခွတွင်ချည်နှောင်ပြီးအရှေ့ဘက်မျက်နှာမူ၍ခြေထောက်နှင့် မြေပြင်ထိကပ်အနေအထားဖြင့်အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိပြီး၎င်းအနီးတွေ့ရှိသည့်အိတ်အတွင်းမှမှတ်ပုံတင်ကတ်နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေသူမှာမိတ္တီလာမြို့ပေါက်ချာဖငေ်းရပ်ကွက်ဖကိုထွန်းထွန်း(၄၁)နှစ်(ဘ)ဦးကျော်ညွန့်ဖြစ် ကြောင်းကနဦး စစ်ဆေးချက်များ အရ သိရှိရ […]
လူနာကိုခွဲစိပ်နေရင်း ကိုယ်လုံးတီးချွတ် လူနာကို လှောင်ပြောင်ခဲ့လို့ ဆရာဝန် သူနာပြုများအား အလုပ်ထုတ် ရုပ်/သံ ခွဲစိပ်ခန်းအတွင်း ခွဲစိတ်ခံရန် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ဖြစ်၍ သတိမေ့မျောနေသော လူနာကို ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုဆရာမများအပါအဝင် ကျန်မာရေးဝန်ထမ်း ငါးဦးက အပြောင်အပျက်သဘောနှင့် ပတ်ချာလည်တွင် မြူးထူးကခုန်ကာ ရယ်သွမ်းသွေးခဲ့ကြသည့် ဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါဝန်ထမ်းများ […]
တစ်နေ့ ထိုင်ထ အခါ (၂၀) လုပ်ရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုးတွေ.. ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာလှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ချင်တယ်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ နေ့စဉ်ထိုင်ထလုပ်ပေးတာပါပဲ။ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းက အရမ်းရိုးရှင်းလွန်းပေမယ့် ရလာမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက အံ့မခန်းမို့ အထင်သေးလို့တော့ မရဘူးနော် ….. ။ […]
ကလေးမြန်မြန်အိပ်အောင် ဘီယာတိုက်တဲ့ ကလေးထိန်း (ရုပ်သံ)
ကလေးမြန်မြန်အိပ်အောင် ဘီယာတိုက်တဲ့ ကလေးထိန်း (ရုပ်သံ) လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်လေးကို နို့တိုက်ရမယ့်အစား ကလေးမြန်မြန်အိပ်အောင် သောက်လက်စ ဘီယာကိုတိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ရုပ်သံ အွန်လိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ဆူညံသွားခဲ့ပါတယ် ….. ။ ရုပ်သံမှာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကလေးထိန်းတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးက ကလေးကို […]
သူကြောင့် ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို သင်အရူးအမူးစွဲလန်းနေမိပါပြီ
သူကြောင့် ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို သင်အရူးအမူးစွဲလန်းနေမိပါပြီ လူတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းမိသွားရင် အရမ်းကို ခံစားရပါတယ်။ ချစ်တဲ့အဆင့်က သိပ်ပြီး မခံစားရပေမယ့် စွဲလန်းတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်သွားရင် အရမ်းကို ခံစားရခက်ခဲလှပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုတွေ ခံစားနေရရင် သူ့ကိုသင် အကြီးအကျယ်စွဲလန်းမိနေတာ သေချာပါတယ်နော် ….. ။ […]